Ọrụ - Beijing Ca-Long Engineering Machinery Co., Ltd.
Dịka otu n'ime akụkụ dị mkpa nke AMP, achọrọ ya nke ọma ịrụ ọrụ ya nke ọma. Anyị imewe bụ a Nchikota isi ike ndọda na nke abụọ akpa nyo, nke osobo niile gburugburu ebe obibi chọrọ na China na mba Europe. N'okpuru ọkọlọtọ na-arụ ọrụ ọnọdụ, emission ịta na nyo ikuku tinyekwa nwere ike iru ọkọlọtọ 20mg / m3 na ọbụna ka mma.
Iji hụ na arụmọrụ nke nyo, anyị na-ahọrọ nyo akpa mere nke American Dupont ihe Nomex, nke nwere ogologo oge ndụ na magburu onwe-arụ ọrụ arụmọrụ.
N'ime afọ abụọ gara aga, anyị etinyela ihe ntanetị 2 na Finland iji melite osisi ochie na-agwakọta. Ngwaahịa anyị nwere ike ịchọta ihe niile metụtara gburugburu ebe obibi ma nwee nnukwu otuto site n'aka onye ọrụ.
Osi mmiri ọkụ mmanụ
A na-eji mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ maka tankị bitumen na mmanụ ọkụ, nke dị na ọkpọkọ nke usoro kpo oku na tankị bitumen. Esi mmiri ọkụ kwadebere akwa larịị tankị na ala larịị nchekwa tank, nke hụ nchekwa na elu na-arụ ọrụ arụmọrụ.
Banyere burner, anyị kwadoro ụwa a ma ama ika soplaya si Italia, Baitur. Kinddị mmanụ ụgbọ ala bụ nhọrọ sitere na mmanụ ọkụ, mmanụ dị arọ na gas gas. A na-achịkwa ọkụ na nhazi ọkụ.
Ike esi mmiri ọkụ bụ 300,000 Kcal / h - 160,000Kcal / h.
Granuated mmako System
Granuated mmako usoro kwuchara weighting na ụgbọ mmako. Iji nweta korota dị elu, enwere ike ịgbakwunye ihe ndị ọzọ, dị ka Viatop, Topcel na usoro nke ịkpụkọ.
A na-enye ihe oriri dị iche iche site na hopper dị iche iche, nke mbụ n'ime nchekwa nchekwa, wee gafee ọkpọkọ na urukurubụba, ihe mgbakwunye ga-abanye na-eri nri. Site n'enyemaka nke ịchịkwa kọmputa, a ga-etinye ihe mgbakwunye n'ime igwekota.
Ca-Long osisi na-onwem ụwa ama ika ọnwụ sọ, nke nwere ogologo ndụ ndụ.
Dị ka ọ dị na mbụ, anyị nwere ọnụọgụ ụdị ọnya niile maka mkpa mberede nke ndị ahịa, yabụ onye ahịa anyị nwere ike ịhapụ ngwa ngwa ngwa ngwa site na ikuku.
Akụkụ bụ isi nke usoro nchịkwa Ca-Long maka AMP bụ interface igwe igwe enyi ya, nke ndị ọrụ Ca-Long AMP na-eto nke ukwuu. Anyị nwere ike ịnye ọrụ mmelite mmemme na AMP nke ika ọ bụla n'asụsụ Bekee ma ọ bụ nke Russia.
Mwube nke ụlọ
Site na mmepe nke ụlọ ọrụ AMP, a ga-emelite osisi ochie iji mezuo ọhụụ ọhụrụ ma chekwaa ego ịzụrụ osisi ọhụrụ. Nke mbu, anyi nwere ike inye ihe obula nke AMP iji kwado osisi ochie. Nke abuo, anyi nwere ike itinye usoro RAP na AMP ochie obula maka ịchekwa onu ahia. Nke ato, enwere ike imelite AMP ọ bụla na ụdị ahịhịa na-emetụ gburugburu ebe obibi iji mezuo ihe ọchọrọ gburugburu ebe obibi.